Izinto zokudlala kunye ne-DIY, uyenza njani iithoyi zakho -Ikaro
yokuqalisa >> Amathoyizi
Izinto zokudlala zezona zinto ziphambili ekufundeni abantwana. Wonke umntu ukhula enezinto zokudlala, nkqu nakwilizwe elingenazo izibonelelo, apho ukuba azinazo izinto zokudlala, zenziwa ngayo nayiphi na into abanayo.
Umbono wokuzama i-DIY yeethoyi okanye indlela yokwenza iithoyi ngokwakho weza ngomhla endafumanisa ngawo umsebenzi Arvind gupta Iminyaka emi-6 eyadlulayo, kwintetho yeTED. Lo mqambi wase-Indiya uzinikele ekwenzeni nasekuyileni iithoyi ezivela kwinto ehlaziyiweyo kunye nelifa lakhe linomtsalane.
E-Ikkaro andijongi kuphela kulo mxholo, kodwa uyilo lwezinto zokudlala ezilula ezenziwe ngezinto ezenziwe ekhaya, ezihlaziyiweyo kunye nezinto ezifikelelekayo ngokulula ziyinto enomtsalane kwaye ndifuna ukujongana nobunzulu ngakumbi.
Ukuba uArvind uthi:
Eyona nto intle umntwana anokuyenza ngezinto zakhe zokudlala kukuzophula
Ndingongeza ukuba ukongeza ekuwaphuleni, zenze. Makhe abenze. Yindlela yokufunda ngokwakho, inkuthazo kunye nobuchule bokuyila.
Ndikhumbula ndisemncinci, yonke into bendiyenza ngephepha, ikhadibhodi, izinti, amatye kunye nezinye izinto zokudlala….
Izixhobo zesoftware ye LEGO
Njengomlandeli olungileyo we-LEGO, ngokuqinisekileyo wenze ezininzi izinyusi ongathanda ukwabelana ngazo nabahlobo, usapho okanye ukukhumbula kwixa elizayo ukuba ungaphinda ulihlanganise njani na elo nani.
Kule nto, kungcono ukwenza isethi yakho okanye ikiti yendibano nge LEGOVirtual kunye nokusetyenziswa Isoftware ethile yokwenza imiyalelo ye-LEGO. Nge Ukunyusa iLego Senze ezinye izinto eziphuma kwiirobhothi zakudala kwaye ndingathanda ukwabelana ngazo kwaye kwelinye icala iintombi zam zenza izinto ezininzi, ezinomdla kakhulu, amanani avela ebantwaneni kuphela kwaye ndicinga ukuba yindlela entle kakhulu yokubhala. .
Ukukhangela iinketho ndifumene inani elikhulu lezixhobo kwihlabathi jikelele le-LEGO Virtual assembly. Kukho a Umgangatho osekwe kwiCAD, kukho abahleli, ababukeli, abanikezeli kunye noopopayi ngenxa yamabandla siwenzela. Kwaye njengoko unokucinga, kukho uluhlu olude lwesoftware kunye neenkqubo ekufuneka ndizame kwaye emva koko ndikuxelele kwaye ndicebise ukuba yeyiphi enokusetyenziswa.
Abantu abaninzi bakha kuphela iindibano ezi-5 eziza kwimiyalelo ye ikiti yegosa kwaye besiyibona kwibhlog kwaye ihlala ivaliwe ngaphandle kokwazi enye into emasiyenze.
Kodwa into eyonwabisayo kukwenza izinto ezintsha kunye nokusebenzisa iziqwenga, ngakumbi iiselfowuni ukwenza ezakho iindibano. Ngoko ke ndiza kukuvumela ukuba ufumane Iimbono zento onokuyenza nge-LEGO Boost yakho kumanqanaba ahlukeneyo, ukusuka kwiindibano zabantwana ukuya kwiindibano kunye nezinye izixhobo zokusebenza kwezobuchwephesha.
Ukunika i-LEGO Boost ngakumbi, ndikushiya uthotho lweengcebiso.
Uyenza njani iThaumatrope
Ku malunga into yokudlala eyenza i-optical illusion. I-thaumatrope yidiski enokuthi yenziwe ngekhadibhodi, isinyithi, umthi okanye enye into apho iintambo ezimbini zifakwe kuyo ukuze zijikeleze. Kwicala ngalinye lediski kukho inxalenye yomzobo. Iintambo ziguqulwa kwaye zijikelezwe, ukwenzela ukuba umzobo wenziwe ngamacala omabini e-albhamu yethu.
Yenye yezinto ezibizwa zokudlala zefilosofi, esithetha ngayo apha ngezantsi. Uthotho lweethoyi ezenziwe ekupheleni kwenkulungwane ye-XNUMX kwaye zisekwe kwiziphumo zamehlo kunye nenkohliso. Babengabo bangaphambili kwi-cinema njengoko siyazi ngoku.
El Lego Boost kit yerobhothi isekwe kumacandelo amathathu asebenzayo, ajikeleze kuwo onke amanye.
Eyona nto ibaluleke kakhulu yiHubhu yokuHambisa equlathe imoto enezembe ezi-2 kunye nemodyuli yeBluetooth ukunxibelelana nethebhulethi okanye iselfowuni. Kuba yonke into kwi-Boost yenziwe nge-app yayo.
Ezinye iziqwenga ezibini ziyimoto yesibini kunye nokusondela kunye nenzwa yemibala.
I-LEGO Boost sisixhobo sokuqala iirobhothi sabantwana esisekwe kwiziqwenga zeLEGO.. Iyahambelana ne-LEGO yendabuko kunye neTekhnoloji, ukuze usebenzise zonke iziqwenga zakho kwiindibano ezizayo.
Le Krisimesi iZilumko ezithathu zinike intombi yam eneminyaka eli-8 ubudala i-LEGO® Boost. Inyani yile yokuba ndambona kwakamsinya. Khange ndifune ukwazisa intombi yam kwimicimbi entsonkothileyo, kodwa kudala ndiyicela kwaye inyani kukuba amava abe mahle kakhulu.
Kuyanconywa kubantwana abasusela kwiminyaka esi-7 ukuya kweli-12 ubudala. Ukuba abantwana bakho baqhele ukudlala ne-LEGO, indibano ayizukubeka ngxaki. Kwaye uya kubona ukuba phakathi kokubonisa iapp kunye neenkcazo ezivela kuwe, baya kufunda kwangoko ukusebenzisa inkqubo yebhloko.
Ixabiso layo lijikeleze i- € 150 unako yithenge apha.
I-LEGO Boost ayizukuxhuma iBluetooth
Ingxaki ephambili endiyifumene kude kube ngoku nge-LEGO Boost robot kukuba kuxhomekeke kwisixhobo (ithebhulethi okanye i-smartphone) ... Qhubeka nokufunda
Uyenza njani into ejikelezayo ngaphandle kweCD
Siya ku ukwakha ujikeleziso lwasekhaya ngaphezulu kwezinto ezibuye zisetyenzisiwe. Kule meko siza kusebenzisa iiCD ezindala okanye iiDVD ezingasasebenziyo. Ngumsebenzi wokwenza nabantwana. Kulungile nabantwana bethu, okanye kumasifundisane esikolweni, kwisikolo sasehlotyeni, njl.
Singathatha ithuba lomsebenzi kwizinto ezininzi, cacisa ukuba yintoni a gyroscope kunye nemisebenzi kunye nezinto eziluncedo enazo okanye ukuba zincinci, singabafundisa ukusebenzisa ikhampasi, ukusika nokuphinda basebenzise izixhobo. Ngaba ayisiyi Uhlobo lwesipina :) kodwa nangona ndandimangalisiwe yinguqulelo yemabhile yokujikeleza ngaphezulu kwe-1'30 »
Inqaku lohlulwe laba ziinxalenye ezimbini ezizindlela ezimbini zokwakha umphezulu wokujikeleza. Kwindawo zokuqala nezilula ezi-3 zisetyenzisiwe, iCD / iDVD, imabhile kunye neplagi. Okwesibini kukwakha kwakudala okwakusekwe kwinqaku leMiyalelo kwaye inzima ngakumbi ukuyenza. ayininzi, kodwa ayifanelekanga kubantwana abancinci.
Ndizamile ukwenza ividiyo ;-)
IjikelezisaEzo zinto zokudlala zikamtyholi eziqhuba bonke abantwana kunye nabafana abaphambeneyo okwethutyana kule ndawo (kwaye nangakumbi baphambuka ngakumbi ootitshala) nabo bafikile eIkaro. Ziquka umzimba, odla ngokwenziwa ngentsimbi okanye ngeplastiki, uqhotyoshelwe kumbindi wokujikeleza ajikelezayo. Le ntshukumo, ngasizathu sithile siyayithanda.
Bathembisa ukunceda i-ADHD, ukuphuculwa koxinzelelo, ukunciphisa uxinzelelo, njl., Nangona kungangqinwa nto. Baye bakwazi ukungena kuluhlu lweemveliso ezingama-20 ezithengisa kakhulu kwiAmazon. Umkhuhlane we-Spinner umangalise wonke umntu. Banefayile ye- Ijelo kwiReddit apho siza kufumana ulwazi oluninzi, olunomdla kakhulu.
Nwabisa into yokudlala yasekhaya yabantwana
Kumgca we some izinto zokudlala kunye neeprojekthi Oko besimkile ukuze ubenze ngeyakho Oonyana siyakushiya oku into yokudlala ejikelezayo.
Ilula ngokwenene kodwa loo nto inokwenza ukuba nibe nexesha elimnandi kunye nabantwana bakho okanye abatshana.
Into yokudlala eselfowuni
Andazi nokuba le nto yokudlala inalo igama, kodwa ilungele ukwenza nabantwana abancinci endlini.
Ilula kakhulu kwaye ngokuqinisekileyo baya kuyonwabela bezenzela izinto zokudlala.
Kwividiyo ungabona ukuba isebenza njani kunye nefuthe eliyenzayo.
Iphepha1 Iphepha2 Iphepha3 Elandelayo →